Warar - Mashiinka Qashin-baxa Korantada
Edm waxaa inta badan loo adeegsadaa sameynta wasakhaha iyo qaybo leh qaabab isku dhafan oo godad iyo godad ah; Ka baaraandegidda waxyaabo kala duwan oo wax lagu kala qaado, sida isku-darka adag iyo birta adag; Ka shaqeynta godadka qoto dheer iyo kuwa ganaaxa, godadka qaababka gaarka ah leh, jeexdin qoto dheer, kala goysyada cidhiidhiga ah iyo jarista xaleefyada khafiifka ah, iwm; Qalabaynta qalabka kala duwan ee samaynta, sheybaarada iyo astaamaha giraanta dunta, iwm.
Inta lagu guda jiro EDM, qalabka korontada iyo qeybta shaqada waxay u kala horreeyaan labada tiir ee korontada garaaca wadnaha oo lagu shubayo dareeraha shaqeeya, ama dareeraha shaqeeya waxaa lagu soo oogay farqiga sii-deynta. Qalabka korantada waxaa lagu xakameynayaa inuu ku quudiyo qalabka shaqada iyada oo loo marayo farqiga nidaamka xakamaynta otomaatiga ah. Marka farqiga u dhexeeya labada koronto uu gaaro masaafo cayiman, danab kacsanaan ah oo laga hirgaliyo labada koronto ayaa kala goyn doona dareeraha shaqeeya isla markaana dhalin doona dheecaan dhimbiil.
Marinka yar yar ee dheecaanka, qadar badan oo tamarta kuleylka ah ayaa isla markiiba urursan, heerkulku wuxuu noqon karaa mid sareeya illaa 10000 ℃ cadaadiska sidoo kale wuxuu leeyahay isbeddel fiiqan, sidaa darteed qalabka biraha maxalliga ah ee ka soo baxa dusha shaqada ee bartaani isla markiiba dhalaali kara oo uumi bixi kara, kuna qarxi kara dareeraha shaqeeya, si dhakhso ah isu ururiya, samee walxo bir ah oo adag, oo ay la tagayaan dareeraha shaqeynaya Waqtigaan dusha sare ee goobta shaqada ayaa ka tagi doonta calaamado yar oo god ah, dheecaanka ayaa si kooban u istaagay, shaqeynaya dheecaanka u dhexeeya labada koronto si loo soo celiyo xaaladda daboolka.
Qalabka garaaca wadnaha ee soo socda ayaa markaa ku burburaya meel kale oo ay korantoyinka isku dhowyihiin midba midka kale, soona saaraya shidmo dhimbiil ah isla markaana ku celcelinaya howsha. Sidaas awgeed, in kasta oo xaddiga birta ay daxalmayso markii uu garaaca wadnaha yar yahay ay aad u yar tahay, haddana bir badan ayaa baabi'in karta kumanaan ka mid ah dheecaanka garaaca wadnaha halkii ilbidhiqsi, oo leh wax soo saar cayiman.
Xaalada haysashada farqiga dheecaanka joogtada ah ee u dhexeeya qalabka korontada iyo qalabka shaqada, birta qalabka shaqadu wuu jajaban yahay halka qalabka korantada si joogto ah loogu quudinayo qalabka shaqada, ugu dambaynna qaab u dhigma qaabka qalabka korantada ayaa la farsameeyay. Sidaa darteed, illaa iyo inta qaabka koronto-dhaliyaha iyo qaabka dhaqdhaqaaqa qaraabada u dhexeeya korantada aaladda iyo qalabka shaqada, noocyo kala duwan oo muuqaallo isku-dhafan ayaa la farsameyn karaa. Qalabka korantada ee dharka badanaa waxaa laga sameeyaa walxaha u adkaysta daxalka oo leh habdhaqan wanaagsan, barta dhalaalaysa sare iyo habsocodsi fudud, sida naxaasta, garaafka, macdanta naxaas-tungsten iyo molybdenum. Marka la shaqeynayo mishiinka, qalabka koronto ayaa sidoo kale leh lumis, laakiin kayar xaddiga wasakhda ee biraha shaqada, ama xitaa kudhow wax khasaaro ah.
Maaddaama uu yahay dheecaan dheecaan ah, dareeraha shaqeeya ayaa sidoo kale door ka ciyaara qaboojinta iyo ka-saarista qashin-qaadista inta lagu guda jiro howsha. Dareeraha shaqada ee caadiga ah waa dhexdhexaad leh isku-dhafan oo hooseeya, dhibic bir sare leh iyo waxqabad deggan, sida kerosene, biyo la gooyay iyo emulsion. nooc ka mid ah dheecaanka iskiis u faraxsan, astaamaha lagu garto ayaa ah sida soo socota: labada koronto ee dhalaalka dhimbiilku waxay leeyihiin danab sare dheecaanka ka hor inta ay soo baxayaan, marka ay labada koronto soo dhowaadaan, dhexdhexaadku wuu jajaban yahay, ka dibna dheecaan dhimbiil ah ayaa dhaca. iska caabinta u dhaxeysa labada koronto si aad ah ayey u hoos u dhacdaa, waxaana sidoo kale hoos u dhac ku yimaaddaa korantada u dhaxeysa korantada. Kanaalka dhimbiiluhu waa in la demiyaa waqtiga ka dib marka la ilaaliyo muddo gaaban (badanaa 10-7-10-3s) si loo ilaaliyo " tiirarka qabow ”sifooyinka dheecaanka dhimbiil (ie, tamarta kuleylka ee badalaada tamarta kanaalka ma galeyso qoto dheer koronto waqtiga), si tamarta kanaalka loo isticmaalo Saamaynta ugu yar ee tamarta kanaalka waxay sababi kartaa in korantada lagu wada jajabiyo deegaanka Habka ay ifafaalaha daxalka ee soo saara marka la isticmaalayo dheecaanka dhimbiilku uu ku dhaqmayo mashiinka cabbirka cabbirka ee walxaha waxaa lagu magacaabaa mashiinka dhimbiil koronto.Edm waa dheecaan dhimbiil dareere ah Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo ka hooseeya heerka korantada Sida waafaqsan foomka korantada qalabka iyo astaamaha dhaqdhaqaaqa qaraabada ah ee u dhexeeya korantada aaladda iyo qalabka shaqada, edM waxaa loo qaybin karaa shan nooc. workpiece dhaqaaqaysa iyadoo la raacayo qaabka iyo cabirka la doonayo, Edm shiidi iyadoo la isticmaalayo silig ama sameynta giraangir wax lagu shiido oo tabinta ah sida qalabka korontada ee daloolka godka ama sameynta wax shiida; Waxaa loo adeegsaday makiinada dunta ging gage, gage gage greeg , gear iwm , kor u qaadida dusha sare iyo noocyada kale ee processing.Edm waxay farsameyn kartaa qalabka iyo qaababka isku dhafan oo ay adag tahay in lagu gooyo mashiinada caadiga ah Ma jiro xoog goyn inta lagu guda jiro makiinada; Ma soo saarto bur iyo goynta jeexitaanka iyo ciladaha kale; Qalabka koronto qalabku uma baahna inuu ka adkaado maaddada shaqada, Isticmaalka tooska ah ee farsamaynta korantada, si fudud loo gaaro otomatiga; Ka dib marka la shaqeynayo, dusha sare ayaa soo saareysa lakabka metamorphosis, kaas oo codsiyada qaarkood ay tahay in laga sii saaro; Waa dhib in lala macaamilo qiiqa wasakhda ee ka dhasha nadiifinta iyo ka shaqeynta dheecaanka shaqeeya.
Waqtiga boostada: Jul-23-2020
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka,